Amaholide Ashibhile ngo-Agasti - Amathiphu ezinsuku zakho zokuphumula | Ukuhamba kwe-Absolut
Amaholide ashibhile ngo-Agasti
Sicabanga ukuthi ukukwazi ukujabulela amaholide ashibhile ngo-Agasti kuyingxenye yephupho, kodwa cha. Kukhona njalo ezinye izindlela ezingabiza kakhulu futhi zishintshe ngokuphelele leyo mibono esinayo. Usenesikhathi sokuzithokozisa futhi uphume uyokujabulela inyanga yasehlobo ngokwenza kahle.
Ngokulandela nje uchungechunge lwezinyathelo noma amathiphu, sizobe sisendleleni efanele yokuba neyethu indawo yokuphupha ukufinyelela. Amaholide ashibhile ngo-Agasti ngeke esaba iphupho nje, kepha manje nawo angagcwaliseka ngaphansi kokucabanga kwakho. Ungaphuthelwa okulandelayo!
1 Ungawathola kanjani amaholidi ashibhile ngo-Agasti, ukubhuka
2 Bheka izindawo ezinesidingo esincane
3 Indawo yokuhlala nenketho yokudla yokonga imali
4 Ukuhamba ngezindleko zokwabelana ngeqembu
5 Yiziphi izindawo ongazivakashela eSpain?
6 Imoto noma isithuthi somphakathi ukuzulazula lapho uya khona?
Ungawathola kanjani amaholidi ashibhile ngo-Agasti, ukubhuka
Isinyathelo sokuqala okufanele sisithathe ukuya enjini yokusesha bese sikhetha ukukhetha izinsuku nezindawo. Ngale ndlela, sizoboniswa zonke izinketho ezitholakalayo. Kepha ngeke kube lula kangako ukufuna iholide ngo-Agasti. Ngakho-ke, akukho lutho olufana nokwenza amawebhusayithi amahle kakhulu futhi uhlale unake i- izinguquko zokubhida lokho kungavela. Lapho ubona inani elifanelekile lendiza noma lehhotela, yisikhathi sakho. Kuhle ukwenza ukubhuka ngesikhathi esincane, ngoba singonga imali enhle. Ubuye uqiniseke ukuthi unokubhuka ngaphansi kwengalo yakho futhi uzobe uzolile noma uzolile kuze kufike usuku olukhulu.
Bheka izindawo ezinesidingo esincane
Uma siphikelela ukuya ezindaweni ezihehe kakhulu, kusobala ukuthi amanani azokhuphuka kakhulu. Ngakho-ke, kungcono ukukhetha ushintsho lwendawo, kepha ngayo yonke indlela. Akukho okuphikisana nesikhathi samanje kepha sijabulela njalo lokho esithanda ukukwenza kakhulu. Khetha izindawo ezingezona ezokuvakasha ezingako, amadolobha amancane noma mhlawumbe izintaba esikhundleni solwandle. Vele, ngamazinga okushisa aphakeme, uma ufuna ibhishi, bheka lezo ezikude kakhulu nomphakathi jikelele. Uzojabulela imvelo engonakalisiwe futhi kuzoba ukutholakala kwangempela. Kuzohlala kunokukhetha okungabizi kakhulu futhi okungokoqobo ukuze ukwazi ukukujabulela ngokugcwele.
Indawo yokuhlala nenketho yokudla yokonga imali
Kuhlala kuyindaba yokubukeka, kepha ezikhathini eziningi, ukukwazi ukugcina indawo yokuhlala kanye ibhodi lesigamu noma ibhodi eligcwele kuzokwenzela yona. Njengoba ukuphuma ukuyodla ngaphandle kungabonakala kushibhile kepha ekugcineni senza izibalo, sizophuthelwa ingcosana. Uma unokukhetha, zama ukukhetha indawo yokuhlala kanye nokudla. Ngaphandle kwalokho, ungahlala ukhetha indlu enekhishi futhi ngaleyo ndlela ulungiselele ukudla okuyinhloko kuyo. Kuzohlala kushibhile njalo!
Ukuhamba ngezindleko zokwabelana ngeqembu
Kuyiqiniso ukuthi akukwazi ukwenziwa njalo futhi siyakuqonda lokho. Kepha noma kunjalo, kungumqondo okufanele uwugcine engqondweni. Ngoba uma nihamba ngababili nizofana kakhulu ukusabalalisa izindleko futhi njalo kuwusizo. Ngendlela efanayo, ungakhetha indawo eshibhile impela uma uzochitha usuku olwandle. Noma, ingqikithi yefulethi isazoba nenzuzo enkulu futhi ngaphezu kwalokho, yenze ukudla okukuyo. Ngokuqinisekile ngale ndlela ungathokozisa abantu abadala asebekhulile!
Yiziphi izindawo ongazivakashela eSpain?
Mhlawumbe kulo nyaka ufuna ukuhlala ezweni lethu futhi uvakashele lezo zindawo esaziyo, kepha mhlawumbe hhayi njalo mathupha. Ngakho-ke ucabanga ngokuba opholile kancane ehlobo, indawo esenyakatho ihlale ikhethekile.
ISan Juan de GaztelugatxeIsiqhingi esisolwandle lwaseCantabrian, ikakhulukazi eBermeo, ezweni laseBasque. Ukuyifinyelela, unochungechunge lwezinyathelo okufanele ziwele njalo ukujabulela i-hermitage yekhulu le-XNUMX, eseqophelweni eliphezulu kakhulu. Indawo yenganekwane!
Isiqhingi saseCies: IGalicia konke kuyisethi yezindawo zemilingo. Lapho imvelo ihlangana nolwandle futhi isishiya nezindawo ezibabazekayo ezinjengalezi. Imayelana neziQhingi zeCíes, lapho sithola khona umbukwane wamabhishi e-paradisi ahlanganiswe nemvelo. Zifunwa kakhulu futhi ngaphezulu ehlobo, kepha kufanelekile.
Amachibi aseCovadonga e-Asturias: Impela. I-Asturias nayo inezimo esingenakuzikhohlwa. ICovadonga ingomunye wabo. Uzothola ukuthutheleka okukhulu, kepha ungahlala ukhetha ukuhlala kwenye indawo eseduze uhambe uhambo lokuya emadolobheni aseduze, uvakashele iCangas de Onís noma iRibadesella.
I-Ubansa ne-Andía Natural Park e-Navarra: Lapho imvelo izokwamukela khona kusukela kumzuzu wokuqala.
Indawo yakudala yaseLeónKokubili ezokungcebeleka nezentengiselwano ziyahlangana kuyo futhi-ke, kungenye yezinto ezibalulekile nendawo okufanele uyicabangele.
ngakho USitges eBarcelona njengeBesalú eGirona noma eMontserrat, nazo ziyizindawo ezinhle ongazijabulela ngamaholide akho. Ngaphandle kokukhohlwa iMalaga noma i-Almería nezindawo zabo ezihlukene, yize lapho sizophinde sithole ukushisa okuthe xaxa. Kuyohlale kunendawo enhle ekulindile.
Imoto noma isithuthi somphakathi ukuzulazula lapho uya khona?
Iqiniso ukuthi uma uthatha imoto lapho uya khona, kungcono kakhulu. Okokuqala ngoba uzokonga kumathikithi akho bese ngoba ungahamba ngokukhululeka uma ufisa. Ngakho-ke imoto ingenye yezinketho zokuqala okufanele uzicabangele. Kepha uma kungenzeki, nganoma yisiphi isizathu, lapho i- izithuthi zomphakathi kungokwesibili. Yebo, kuyiqiniso ukuthi kwesinye isikhathi kufanele silinde isikhathi eside, okungasiniki induduzo enkulu noma ukuguquguquka, kepha kushibhile. Kokubili i-metro nebhasi kuyizindlela ezingcono kakhulu zokuya ezindaweni ezingekude kakhulu. Njengoba kufanele sikhumbule ukuthi amazinga okushisa aphezulu ka-Agasti awanelisi ukuhamba kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Amaholide ashibhile ngo-Agasti
ILa Hermida Gorge